Creative Writing » အလံထူခွင့် မရတဲ့ရွာကလေး ၃	10
ခက်တော့ ခက်ချေပြီ…..။ ရှေးရိုးစွဲလွန်း ရိုးသားလွန်းသူတွေကို နားလည်အောင် မည်သို့ ရှင်းပြရမည် မသိတော့ပေ….။ ယခုဒီရွာလေးသို့ လာသည့်လမ်းသည် သတိထားမောင်းနှင်ရသလို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်မောင်းနှင်တတ်မှသာ လာသင့်မောင်းသင့်သည့်လမ်း …. ဒီလိုလမ်းမျိုးမှာ တိမ်းမှောက်သွားသည့် မော်တော်ကားလေးကို မောင်းနှင်လာသူက မနေ့တစ်နေ့ကမှ ကားမောင်းတတ်ပြီး တက်မောင်းနေသူ … ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်ဂီယာကိုထိုးရမည်…. ဘယ်အရှိန်နှင့် ဘယ်လိုအတက်ကို တက်ရမည်ဆိုတာ နားမှလည်ပါလေစ။ ထို့ပြင် ဒီလမ်းဒီခရီးကို မောင်းနှင်ဖူးခြင်းမရှိပဲ မော်တော်ကားနှင့် လေယာဉ်ပျံမှားရလောက်သည့် အရှိန်ဖြင့် မောင်းနှင်လာခြင်းကြောင့် တိမ်းမှောက်မှု ဖြစ်ပွားတာရော မဟုတ်လောက်ပေဘူးလား။ နောက်တစ်ခုက ရွာသူရွာသားများ ပြောနေကြ ယုံကြည်နေကြသည့် အရှင်ကြီးကား အလံထူသည်ကို မကြိုက်ဟုဆိုလျှင် အလံထူသည့်သူကိုပဲ ပြုစားပေါ့ … အဘယ်အတွက် မဆိုင်သည့် သူများကို ပြုစားလေသနည်း။ ကောင်းသောအလုပ်ကိုလုပ်ရန်အတွက် အလံထူခြင်းကို အဘယ်အတွက် မကြိုက်လေရသနည်း။ အကယ်၍ သူတို့ ယုံကြည်နေသည့် အရှင်ကြီးမှာ နတ်ကောင်း နတ်မြတ်ဆိုလျှင် လူသားတို့ ဒုက္ခရောက် ဘေးတွေ့စေမည့် ကိစ္စများကို ဒုက္ခမရောက်အောင် ဘေးမတွေ့အောင် တားဆီးပေးရမည် မဟုတ်လား။ ယခုတော့ အရှင်ကြီးက မကြိုက်လို့ လုပ်ချလိုက်တာနှင့် ကားတွေမှောက်ရလေရောလား ……။ ဒီလို ထင်ရာမြင်ရာ စွတ်ပြောနေကြ စွတ်ယုံကြည်နေကြသဖြင့် ရွာစောင့်နတ် အရှင်ကြီးတွေလည်း နာမည်ပျက်တာ များလှချေပြီ…….။ သူတို့ ရှိခြင်း မရှိခြင်း စွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်း မစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းကို အသာထား…… နတ်တစ်ပါးဖြစ်ဖို့ရန်မှာ လူ့ပြည်လောကတွင် စိတ်ကောင်းမွေးပြီး ကုသိုလ်ဒါနပြု သီလဆောက်တည်သောသူများသာ နတ်ဖြစ်ကြသည်ဟု ကြားဘူးသည်မို့ စိတ်ကောင်းမွေးပြီး ကုသိုလ်ဒါနပြု သီလဆောက်တည်ပြီး နတ်ဖြစ်သူများသည် အဘယ်မှာ လူတွေကို ဒုက္ခရောက်အောင် လုပ်ပါလိမ့်မည်နည်း…… ကျနော်တို့တွေ ဦးနှောက်နှင့်တွေးတောစဉ်းစား ဆင်ခြင်ပြီး ယုံကြည်သင့်မှာ ယုံကြည်ရပေမည်။ @@@@@@@#@#@@@@@@@@@@@@@@@
“မဟုတ်ဘူးဗျ…. ဒီကိစ္စက ကျနော်တို့ရွာက အရှင်ကြီး မကြိုက်လို့ဖြစ်ရတာ … ဟိုနေ့က လမ်းညွှန်ဆိုင်းဘုတ်တွေတပ်ရင်း သာသနာ့အလံလေးတစ်ခု ထောင်မိတဲ့ဆီက စတာ … ရွာကလူကြီးတွေ အရှင်ကြီးကို အလံထူခွင့် သွားတောင်းတာ မရခဲ့ဘူးဗျ… အရှင်ကြီးကို ပူဇော်ပသဖို့ ကြက်ဥပြုတ်တာ ပေါက်ကွဲကုန်တာ… နောက်ပြီး …. ကြက်ခေါင်းမှာလည်း သွေးစကန့်လန့်ဖြတ်ကြီးနဲ့ … အရှင်ကြီးက အလံထူတာ မကြိုက်ဘူးဆိုတာ ပြနေတာ… မရဘူးဗျ…. ကျနော်တို့ အရှင်ကြီးက ဘာအလံထူတာမှ မကြိုက်ဘူး… မယုံမရှိနဲ့နော့ ဖြစ်စဉ်တွေ သက်သေသက္ကာယတွေရှိခဲ့တယ်……။ အလံထူထားတာကို ချက်ချင်းဖြုတ်လိုက်လို့ ကားမှောက်တာ ဒဏ်ရာရရုံပဲ ရတာ…မဟုတ်ရင် လူသေတဲ့အထိဖြစ်သွားနိုင်တယ်…။” ကျနော်တို့အား သူပြောသည့်အကြောင်းအရာများကို ယုံကြည်စေရန်ပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ ကျနော် မရှင်းပြလိုတော့ပါ။ ရှင်းပြလျှင်လည်း အာပေါက်ရုံသာရှိပေတော့မည်။ သူတို့ရွာကလေး အလံထူခွင့်မရခြင်းမှာ အထက်မှာ ကျနော်ရေးပြခဲ့သည့် ပါးစပ်ရာဇဝင်လေးကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်။ ကဲ….. ကျနော်ကတော့ နောက်နှစ်ကျောင်းဖွင့်ချိန် စာရေးကိရိယာ အလှူခရီးသွားရင် မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေမှာ အလံဖြူလေးတွေ စိုက်ပြီး သွားချင်ပါတယ်…. စိတ်ပါဝင်စားပြီး လိုက်ပါလိုသူတွေ ယခုအချိန်ကစပြီး စာရင်းပေးသွင်းကြပါလို့ …..ပြောရင်း….. နားပါရစေတော့…………
ခင်ဇော် says: အလံထူခွင့်မရှိတဲ့ ရွာဖြစ်မှာပေါ့။
မြစပဲရိုး says: ဆရာလေး ရယ်
လောကထဲ ကိုယ်မသိ နိုင်တဲ့ 50-50 အကြောင်း တွေ အများကြီး မဟုတ်လား။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3714
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဥပါဒါန်ကြောင့် ဥပါဒ်ရောက်တယ်ပဲ ပြောရမှာပေါ့… ဒါလုပ်ရင် ဒါဖြစ်တော့မယ်လို့ တွေးမိနေတော့ တကယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါ အကြောင်းရင်းမရှာတော့ဘဲ ဒါကိုပဲ လွှဲချပစ်လိုက်တာ.. သူ့အရပ်နဲ့ သူ့ဇာတ်အဆင်ပြေနေတာပဲ ကောင်းပါတယ်လေ…
koyinmaung says: ရှမ်းပြည်ဘက်မှာဘဲထင်တယ်ကားစီးယင် ၉ယောက်မစီးကောင်းဘူး ၉ယောက်ဖြစ်နေယင် ခဲတလုံးကောက်တင်လာရတယ်ဆိုလား …ကုလားနတ် မင်းကြီး မင်းလေး ကို အပ်ထားတဲ့ကားဆို ၀က်သားတွဲမတင်ရဘူးတဲ့ ကားစက်နှိုး တာမရလို့ခရီးသည်တွေမေးကြည့်တော့ ၀က်သားဝယ်လာတာပါတယ်ဆိုဘဲ ၀က်သားတွဲဖယ်လိုက်တော့မှ ကားကနှိုးလို့ရသွားတယ်တဲ့ .ကြာဘူးတာပြောပါတယ် .. အယူဆိုတာ ယူယင်ရှိတယ်မယူယင် မရှိဘူးဘဲသတ်မှတ်ပါတယ် …
naywoon ni says: ကြုပ်​တို့မှာ ထူစရာ အလံ မှ မရှိဘဲဗျာ အလံထူမှလာရမယ်​ဆိုရင်​​တောင်​ထူစရာမယှိ ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14461
kai says: အလံထူလို့မရဘူးလို့..ထင်နေကြသူတွေကို.. ထူပြဖို့ကြိုးစားတဲ့စိတ်ကိုက.. သာဓုတော်တော်ခေါ်လို့ရနေပါပြီ…။
မြစပဲရိုး says: ကြိုပြီး ပြောထားမယ်။
မြစပဲရိုး says: မမေ့အောင် သတိထားပြီး ပြန်လာ ငြင်း ရမယ် ဆိုရင် …. သူကြီးမင်း ကားမောင်းနေတယ် ဆိုပါစို့။
kai says: ကံ..ကံအကျိုးယုံသူမို့.. ဘယ်ဟာကိုမှပုံသေမထား.. သူ့အတိုင်းအတာ..ကံ..အလုပ်နဲ့.. case by case ရှင်းပါမယ်..။
ကားလမ်းမှာ.. အမြန်နှုန်းဆိုင်းဘုတ်က.. အဲဒီသတ်မှတ်မိုင် လျှော့မောင်းလို့မရသလို.. တိုးမောင်းလို့လည်းမရပါဘူး..။ ၂ခုလုံး +- ၅-၁၀မိုင်ဆို အရေးယူလို့ရပါတယ်..။ လမ်းဆုံကားအ၀င်အထွက် စတော့ဆိုင်း နေရာမှာ.. ပုံမှန် ၅စက္ကန့်ရပ်ခွင့်ပဲရှိပါတယ်..။ ..ပိုရင်… အရေးယူလို့ရပါတယ်…။ ၁၀စက္ကန့်ထက်ပိုကြာနေတဲ့ကားကို.. ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်… နောက်ကဖင်ဝင်ဆောင့်လိုက်ပြီး.. လျှော်ကြေးတောင်းဖို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်…။ Traffic Tickets for Driving Too Slowly
အခုခေတ်လို.. မြန်မာတွေကမ္ဘာအနှံ့ရောက်.. မီဒီယာပွင့်လင်းလာတဲ့အချိန်မျိုးမှာမှ.. ကမ္ဘာကလူအများထုကြီးတွေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုညှိ.. လူသားဆန်စွာနေကြဖို့.. ပြင်ဖို့မကြိုးစားကြရင်.. ဘယ်အချိန်ပြင်ဖို့ကြိုးစားကြမှာလည်း.. ပြင်ကြမှာလည်း…. လို့သာ….မေး….ချင်…။ ကျုပ်သာအစိုးရဆို.. လျှို့ဝှက်အဖွဲ့တခုဖွဲ့ပေးတယ်…။
အဲလို အူကြောင်ကြောင်အယူအစွဲ.. လူသားတွေအတွက်အကျိုးမရှိတဲ့.. အယူစွဲတွေကို.. ဂမ္ဘီရနည်းနဲ့… ချွတ်ပေးတယ်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 997
kotun winlatt says: ကျနော် အလံထူပြီးသွားချင်တယ်ဆိုတာက အစွဲတွေကို ချွတ်ချင်လို့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ မဟုတ်ပါဘူး ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ ခံယူထားကြပြီး ဗေဒင်လေးလည်း ယုံလိုက်ချင် အပင်ကြီးကြီးမြင်ရင် နတ်ကွန်းထားချင်ကြတဲ့ လူတွေ ပညာဥာဏ်နည်းတဲ့ လူတွေကို ဘယ်အရာမဆို သေချာစူးစမ်းလေ့လာဆုံးဖြတ်ပြီးမှ ယုံကြည်ရမယ်ဆိုတာကို သိစေချင်တာပါ။ ရှေးရိုးစွဲ အယူအဆတွေအားလုံးကို တိုက်ထုတ်ချင်လို့ မဟုတ်ရသလို အလိုက်အထိုက်နေနေရခြင်းဟာ ရင်ဘတ်ထဲမှာ နာကျင်ထိခိုက်ရပါတယ် ကျနော်ကပဲ ခံစားတတ်လွန်းလို့လားတော့ မသိပါဘူးလေ။ မျက်စိရှေ့မှာ ဖြစ်နေပျက်နေခံနေကြရတာတွေ အများကြီးပြောပြချင်ပါသေးတယ် အချိန်ရရင်တော့ ပို့စ်တစ်ပုဒ်အနေနဲ့ ရေးတင်ပါဦးမယ်လေ